Ahoana ny fomba hiantohana ny tranokalanao lisitra mainty ho an'ny mailaka | Martech Zone
Talata, Febroary 19, 2008 Zoma, Desambra 12, 2014 Douglas Karr
Nandinika ny iray amin'ireo tranokalanay izahay androany. Hiainga amin'ny fidirana mailaka atsy ho atsy izy ireo - zavatra tsara izany. Ataoko fa efa tafiditra anaty lisitra mainty ny tranokalan'izy ireo… izao no antony…
Manana taratasy fifandraisana amin'ny tranokalan'izy ireo izy ireo. Ampy tsara, saha maromaro handefasana ny mombamomba anao manokana amin'izy ireo hisoratra anarana amin'ny fandraisana andraikitra mailaka ataon'izy ireo. Raha jerena akaiky kokoa anefa, ary fitaovana tena tsotra napetrak'izy ireo ho an'ny spammers izany.
<INPUT type=hidden value="na iza na iza@someone.com"name =" sendto "/>
Jereo ny saha miafina izay ahafahanao mampiditra adiresy mailaka! Ho fitsapana dia nakariko ilay takelaka, napetrako tao ny adiresy mailako, ary nasiako rohy tao amin'ilay saha miafina hafa. Tsindrio ny fandefasana ary iray minitra taty aoriana dia nanana mailaka SPAM tao anaty boaty aho!
Toy izao no ahafahan'ny spammers manohy mandefa mailaka raha tsy manahy ny amin'ny fanakanana azy ireo. Ny hany tadiavin'izy ireo dia ny mahita endrika toa izao ny tranonkalanao ary azon'izy ireo atao ny manao script amin'ny dingana iray izay manosika mailaka an-tapitrisany mandritra ny alina. Iza no voasakana? Tsy ny spammer… ny orinasa manao!
Ity takelaka manokana ity dia ao amin'ny tranokalan a lavitrisa Orinasa dolara fa tsy asa kely. Ary misy an'arivony amin'ireo karazana endrika tsy azo antoka ireo na aiza na aiza eto amin'ny Internet. Ny mahatsikaiky eto dia ny nanaovan'izy ireo izany tamin'ny pejy ASP - pejy iray izay afaka nanao fitadiavana adiresy mailaka mora foana tao amin'ny mpizara ary nampiditra azy ireo.
Raha manontany tena ianao dia mazava ho azy fa efa nilaza tamin'izy ireo isika!
Tags: lisitra maintyForma mailakamarefo ny endrika mailakaendrika spam
Aiza ny bokotra manaraka?
19 Feb 2008 tamin'ny 11:19 maraina
Izaho manokana dia tsy mino an'iza na iza izay tsy manana adiresy mailaka voatanisa ao amin'ny bilaogin'izy ireo ary ny taratasim-pifandraisana fotsiny, saingy toa izany ihany no fomba 100% hanaovana izany. Tiako koa ny adiresy mailaka misy sary hitan'ny olona nefa tsy maintsy soratany. Angamba Flash tafiditra anaty làlana hafa. Lehilahy iray contact form ihany ve ianao?
19 Feb 2008 tamin'ny 11:35 maraina
Aza misalasala - miaro tena ihany izahay. Ny tanjon'ny fifandraisana amin'ny IS ka ny olon-kafa dia afaka mifandray amintsika ihany nefa tsy mamela antsika misokatra ho an'ny spambots.
19 Mey 2008 tamin'ny 12:49 hariva
@Stephen Marina ny anao fa maro ireo mpandahatra programa izay manoratra bots spam no kamo. Ny tiako holazaina dia azonao atao ny mamaky ny valin'ny http://tinyurl.com/yuje9z ary mahazo adiresy an'arivony amin'ny spam.
Ny fiarovana tsara indrindra dia ny fampijanonana ny famoahana adiresy mailaka, ary fampiasana a web form fa tsy.
21 Mey 2008 tamin'ny 3:26 hariva
Azoko tsara izay lazainareo roa. Amiko, ny forme contact dia mahatsapa fa toy ny isa 1-800 fa tsy nomeraon-telefaona amin'ny karatra fandraharahana. Mahatsapa ho be loatra ny tapakilan'ny orinasa / mpanohana.
21 Mey 2008 tamin'ny 3:31 hariva
Mino aho fa PDF dia lahatsoratra tsotra (farafaharatsiny azon'i Google ampidirina izany) ary ny mailakao dia ao amin'ny resume anao, Doug.
Apr 12, 2008 amin'ny 3: 29 AM
Nahaliana ahy ny lahatsoratry ny bilaoginao, saingy tsy azoko tsara ny fomba fiasan'izany.
Raha mameno ity takelaka ity ianao, ahoana no ahazoan'ny spam bots ny adiresy mailakao?
Raha manana sehatra miafina amin'ny adiresy mailakao ny tranonkala, dia mazava ho azy ny fomba ahazoan'ny spam bots azy ireo.
Fa rehefa mameno azy io ianao, tsy tonga dia mandefa fotsiny, ary avy eo lasa ny saha miafina, sa tsy izany? Manana programa napetraka ao amin'io pejy io ve ny spam bot izay misambotra izay ampidirinao na izay apetrak'ilay tranokala ao anaty saha miafina mandritra ny fampiasanao azy?
Tsy azoko. Azonao atao ve ny manazava bebe kokoa an'ity?
Ary inona no azo atao? Ahoana ny fomba fampiharana endrika tsy afaka ataon'ny bots spam koa? Raharaha fotsiny ve ny tsy fampiasana saha miafina amin'ny adiresy mailaka sa mihoatra izany?
Apr 12, 2008 amin'ny 10: 49 AM
Amin'ny maha mpitsidika anao dia tsy tandindomin-doza ianao. Ny olana dia ho an'ireo olona nametraka ity takelaka ity. Spammer iray dia afaka 'manao «highjack» ilay endrika ary mandefa spam amin'ny alàlan'ny fampiasana azy. Fampiharana mahatsiravina napetrak'ilay orinasa ao amin'ny tranonkalany.
Apr 12, 2008 amin'ny 3: 32 AM
Fanontaniana iray hafa ihany… .Raha tsy maintsy ataoko ao anaty pejy iray ny adiresy mailakao, dia inona no fomba tsara indrindra anaovana azy? Azo antoka ve ny mampiasa kaody mpiorina hexidecimal?
Apr 12, 2008 amin'ny 10: 50 AM
Ny spammer dia manana mekanisma mandady sarotra be izay afaka manangona adiresy mailaka amin'ny fomba maro. Ho reraka tokoa aho amin'ny fametrahana ny adiresy mailaka amin'ny pejin-tranonkala ary handefa taratasy fampifandraisana kosa.